iOS 10 ဖြင့် iPhone တွင်ဒေတာသိမ်းဆည်းရန်လှည့်ကွက် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Ignacio Sala | | iOS 10, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှမိုဘိုင်းဒေတာနှုန်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာသည်၊ သို့သော်ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်လထက်ပိုသောအချက်အလက်များကိုဒေတာနှုန်းဖြင့်အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအမြန်နှုန်းဖြင့်ယင်းကိုလျှော့ချလိုက်သောကြောင့်အမြန်နှုန်းဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ရသည် နှုန်းကိုပြောင်းလဲရန်အော်ပရေတာကိုခေါ်လိုပါကလကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရန်အတွက် megabytes အနည်းငယ်ထပ်မံငှားရမ်းပါ။ Apple ကမိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်များအတွက်၎င်း၏ operating system ဗားရှင်းအသစ်ကိုထုတ်ပြန်တိုင်း များသောအားဖြင့်၎င်းသည်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်၊ ၎င်းကိုမသိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုးစေသည်။
1 iOS 10 တွင်အိုင်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဒေတာသိမ်းဆည်းနည်း
1.1 iCloud မိုဘိုင်းဒေတာကိုပိတ်ပါ
1.3 အလိုအလျောက် update များကို iTunes နှင့် App Store မှပိတ်ပါ
1.4 Wi-Fi Assist ကိုပိတ်ပါ
1.7 မိုဘိုင်းဒေတာကို Apple Music မှပိတ်ပါ
1.8 Spotify, Netflix ကဲ့သို့သော streaming application များ၏ streaming အရည်အသွေးကိုပြုပြင်ပါ
1.9 ထို option ကို သုံး၍ အင်တာနက်ကိုဗဟုသုတဖြင့်မျှဝေပါ
1.10 လမ်းညွှန်ရန် Google Chrome ကိုသုံးပါ
1.11 Opera Mini browser ကိုသုံးပါ
1.12 သင်၏ browser cache ကိုမရှင်းပါနှင့်
1.14 Instagram နှင့် Facebook application ကိုဖျက်ပါ
1.15 WhatsApp, Telegram, လိုင်းပေါ်အလိုအလျောက် downloads များကိုပိတ်ပါ။
1.16 Onavo Extend ကို Install လုပ်ပါ
iOS 10 တွင်အိုင်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဒေတာသိမ်းဆည်းနည်း
iOS ၏အရေးအပါဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ iCloud ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဒေတာများအားလုံးကိုအကောင့်တစ်ခုတည်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များအားလုံးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသော application များစွာသော မိတ္တူကူးသိမ်းခြင်း (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းအတွက် iCloud ကိုအသုံးပြုပါ.
သတင်းအချက်အလက်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန် iCloud ကရွေးချယ်စရာနှစ်ခုကိုပေးထားသည်။ Wi-Fi မှတဆင့်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဒေတာမှတဆင့်။ ပုံမှန်အားဖြင့် iCloud သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဒေတာနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းကိုချိန်ညှိချက်များ> iCloud> iCloud Drive မှတဆင့်ပိတ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုမိုဘိုင်းဒေတာ tab ကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဝင်စေသည်။
လျှောက်လွှာအတွင်းအပြောင်းအလဲတစ်ခုခုရှိပါကအီးမေးလ်၊ မက်ဆေ့ခ်ျ၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါကအသိပေးချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများသည်အင်တာနက်မှဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Wi-Fi ကွန်ယက်နှင့်မချိတ်ဆက်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့တွင် application များစွာရှိပါက ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားစာကိုပို့ပေး, ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာနှုန်းနှင့်ပြaနာဖြစ်လာနိုင်သည်.
အလိုအလျောက် update များကို iTunes နှင့် App Store မှပိတ်ပါ
ဇာတိ activated သောနောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ application များနှင့် updates များကိုအလိုအလျောက် download လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဘူယျစည်းမျဉ်းအရ application များသည် ၁၀၀ MB ထက်မကျော်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဒေတာနှုန်းမှတဆင့်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စက်တွင်အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာတပ်ဆင်ထားပါက၊
မသန်စွမ်း iTunes နှင့် App Store မှအလိုအလျှောက်မွမ်းမံမှုများနှင့်ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းများကိုပိတ်ပါ Settings> iTunes Store နှင့် App Store သို့သွားပြီး Use mobile data tab ကိုပိတ်ထားသည်။
Wi-Fi Assist ကိုပိတ်ပါ
၎င်းသည် iOS9၏လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အများစုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာနှုန်းအတွက်အကျိုးရှိသည်ထက် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဒီ function ကျွန်ုပ်တို့သည်အားနည်းသော Wi-Fi အချက်ပြဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်သွယ်ပါကမိုဘိုင်းဒေတာကိုခွင့်ပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့သတိမပြုမိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏နှုန်းသည်လျင်မြန်စွာကုန်ဆုံးသွားနိုင်သည်ဟုဆိုလိုနိုင်သည်။
မသန်စွမ်း Wi-Fi Assist ကိုပိတ်ပါ ချိန်ညှိချက်များ> မိုဘိုင်းဒေတာကိုသွားပြီး Wi-Fi အထောက်အကူဘောင်ကိုအမှတ်ခြစ်ပါ။
အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဂိမ်းတစ်ခုစီ၏အင်တာနက်သုံးစွဲမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်စစ်ဆေးသည့်အခါ app တစ်ခု (သို့) ဂိမ်းတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှုန်းထားအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်သောအခါကြောက်စရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အများအားဖြင့်ထိုလျှောက်လွှာကိုမသုံးပါကသို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာနှုန်းကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်ပါကျွန်ုပ်တို့၏နှုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားတားဆီးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad မှ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကိုသာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်နိုင်သည်။
မသန်စွမ်း အက်ပ်များသို့မဟုတ်ဂိမ်းများအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကိုပိတ်ထားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Settings> Mobile data သို့သွားသည်။ ဒီရွေးချယ်မှုအတွင်းမှာငါတို့ရဲ့ဒေတာနှုန်းထားအတိုင်းလုပ်လိုက်တဲ့အပလီကေးရှင်းတွေနဲ့သုံးစွဲမှုတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ဤ function ၏အသုံးဝင်မှုသည်စံနမူနာအမှန်ဖြစ်သည်မှန်သော်လည်း၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြုသော application များသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်တိုင်းတိုင်းအမြဲတမ်း update လုပ်သောကြောင့် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာနှစ်ခုလုံးအတွက်တကယ့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်သည် မိုဘိုင်း။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဒေတာကိုတူညီသောအတိုင်းအတာဖြင့်သောက်သောလျှောက်လွှာတစ်ခု၏ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်တို့သည်တတ်နိုင်သည် နောက်ခံတွင်မည်သည့်အက်ပ်များကိုမွမ်းမံနိုင်သည်ကိုကန့်သတ်ပါကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝင်စားမှုအရသို့မဟုတ်၎င်းတို့အားလုံးကိုလုံးဝပိတ်ထားနိုင်သည်၊ ဤနည်းဖြင့်ဒေတာနှင့်ဘက်ထရီနှစ်မျိုးလုံးသည်ကြာရှည်ခံလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့အားပိတ်ထားရန်အတွက်နောက်ခံရှိ Settings> General> Update သို့သွားရန်လိုအပ်သည်။
မိုဘိုင်းဒေတာကို Apple Music မှပိတ်ပါ
စာရင်းသွင်းသူ ၁၇ သန်းရှိပြီးဖြစ်သော Apple ၏ဂီတ streaming ဝန်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာနှုန်းဖြင့်ဂီတကိုနားထောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ စားသုံးမှုသည်၎င်းသည်ပေးသောအရည်အသွေးအတွက်အလွန်အမင်းမလိုအပ်သည်မှာမှန်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာအသုံးပြုမှုကိုပိတ်ထားနိုင်သည်၊ တေးဂီတကိုနားထောင်နိုင်သည်၊ စာကြည့်တိုက်ကိုမွမ်းမံနိုင်သည်နှင့်သရုပ်ဖော်ပုံများကိုတင်နိုင်သည်။ အဘို့ Apple Music ဒေတာအသုံးပြုမှုကိုပိတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Settings> Music> Mobile data သို့သွားပါမည်။
Spotify, Netflix ကဲ့သို့သော streaming application များ၏ streaming အရည်အသွေးကိုပြုပြင်ပါ
မိုဘိုင်းဒေတာကိုသိမ်းဆည်းရန်အလွန်ထိရောက်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာ Spotify, Netflix, HBO ကဲ့သို့သောဂီတနှင့်ဗီဒီယို application များ၏စီးဆင်းမှုအရည်အသွေးကိုကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့အားတိုက်ရိုက်ပိတ်ထားရန်ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးအလိုအလျှောက်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်သို့သော်၎င်းအသုံးချပရိုဂရမ်များက၎င်းအသုံးပြုမှုကိုဒေတာများမှမရပ်တန့်လိုပါကမျိုးပွားအရည်အသွေးကိုပြုပြင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ထို option ကို သုံး၍ အင်တာနက်ကိုဗဟုသုတဖြင့်မျှဝေပါ
အသုံးပြုသူတွေအများကြီးသုံးတဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့အိုင်ဖုန်းဒါမှမဟုတ်အိုင်ဖုန်း (သို့) ကွန်ပျူတာနဲ့အတူမိုဘိုင်းဒေတာကိုဝေမျှနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ Wi-Fi မပါရှိသည့်inရိယာ၌ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကိရိယာသည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သောအခါဤရွေးချယ်မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စရပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်အကျွံအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာနှုန်းသည်လျင်မြန်စွာအဆုံးသတ်နိုင်သည်။
လမ်းညွှန်ရန် Google Chrome ကိုသုံးပါ
Safari နှင့်မတူဘဲ Google Chrome သည် browsing လုပ်နေစဉ်အတွင်း mobile data သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချရန် option တစ်ခုရှိသည်။ ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုကိုသက်ဝင်သည့်အခါ၊ ၀ က်ဘ်အသွားအလာအများစုသည်ဂူဂဲလ်၏ဆာဗာများမှဖြတ်သန်းသည် စက်ကိုဒေါင်းလုပ်မချခင် ဂူဂဲလ်ဆာဗာများကအချက်အလက်များကိုဒီဂျစ်တယ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ချုံ့သည်။
မသန်စွမ်း Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုများအတွက်သာ default အနေဖြင့် activate လုပ်သောဒီ option ကို activate လုပ်ပါကျွန်ုပ်တို့သည် application အတွင်းမှ Settings> Bandwidth သို့သွားပြီးရရှိနိုင်သည့်ရွေးစရာများကိုဖော်ပြရန် Preload ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုနှိပ်ပါ - အမြဲတမ်း၊ Wi-Fi သို့မဟုတ်ဘယ်တော့မှမသာ။
Google က Chrome ကိုအခမဲ့
Opera Mini browser ကိုသုံးပါ
Opera သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည့်အခြား browser တစ်ခုဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းအချက်အလက်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည် ငါတို့ရွက်လွှင့်နေတုန်း စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ထိုလုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
သင်၏ browser cache ကိုမရှင်းပါနှင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်နေရာချွေတာရန်အတွက် cache ကိုရှင်းလင်းခြင်းသည်နေရာများစွာကိုသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည် ဒေတာသုံးစွဲမှုဆန့်ကျင်သွားသည်ကျွန်ုပ်တို့အများဆုံးလည်ပတ်သော ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများဖြစ်သောကြောင့် ၀ က်ဘ်၏ပုံသေဒြပ်စင်အများစုကိုပြန်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
အချို့သောကုမ္ပဏီများရှိသည်သောအရူး ဗွီဒီယိုပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုအလိုအလျှောက်သက်ဝင်ပါ ကျွန်ုပ်တို့ app ကိုအသုံးပြုစဉ်ကအဆုံးမရှိပုံရသည်။ Facebook နှင့် Twitter များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် activate လုပ်ထားသော option ကို default applications များဖြစ်သော်လည်းကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်တို့ကဗီဒီယိုများ၏မျိုးပွားမှုကို Wi-Fi ကွန်ယက်ပေါ်တွင်သာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Instagram နှင့် Facebook application ကိုဖျက်ပါ
Mark Zuckerberg ၏ Instagram, Facebook နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများသည်ဘက်ထရီအားကုန်သွားရုံသာမကတွင်းနက်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များကိုအမြောက်အမြားဖြတ်သန်းသွားသည်။ Facebook ၌ဗွီဒီယိုများကိုအလိုအလျောက်ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ ယခင်အမှတ်။ Instagram တွင်၊ ဤအပလီကေးရှင်းသည်အချက်အလက်သုံးစွဲမှုကိုသတိပြုမိသည် သငျသညျဒေတာကိုလျော့နည်းသုံးစွဲဖို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကို setting များကိုကွဲပြားခွင့်ပြုပါတယ်။
WhatsApp, Telegram, လိုင်းပေါ်အလိုအလျောက် downloads များကိုပိတ်ပါ။
လျှောက်လွှာပေါ် မူတည်၍ တစ်နေ့လုံးဗီဒီယိုများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့် GIFs များစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည် (WhatsApp က၎င်းကိုမကမ်းလှမ်းပါ) ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျှောက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားပါကနေ့များကုန်လွန်သွားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာနှုန်းသည်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်လိမ့်မည် ကံကောင်းထောက်မစွာ မည်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားကိုအလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်နိုင်သည် ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာဗွီဒီယိုများကိုအလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှုန်းထားမှဒေတာအများဆုံးသုံးစွဲနိုင်သောဖိုင်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
Onavo Extend ကို Install လုပ်ပါ
Onavo Extend သည်မိုဘိုင်းဒေတာကိုသိမ်းဆည်းရန်ကူညီသည် ဒါကြောင့်သင်ဟာသင်လုပ်ချင်တာကိုဖုန်းပေါ်မှာလုပ်ပြီးသင်ငွေတောင်းခံလွှာကိုမတိုးဘဲအချိန်ဖြုန်းနိုင်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်သင်မိုဘိုင်းဒေတာကိုမည်သည့်အချိန်တွင်သိမ်းဆည်းရမည်ကိုတွက်ချက်ရန်နောက်ခံတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ Onavo Extend သည်သင်လှိမ့်သောအခါသင်ပုံများဆွဲချသည်။ သင်မမြင်နိုင်သောပုံများတွင်အဖိုးတန်သောဒေတာများကိုအသုံးမပြုပါ၊ ၎င်းသည်သင့်ပုံသဏ္qualityာန်နှင့်အညီအရည်အသွေးများ၏အရည်အသွေးနှင့်ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိပေးသည်၊ Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်ပါ။ ဤအပလီကေးရှင်း၏လည်ပတ်မှုသည် Chrome ၏လုပ်ငန်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်ကုမ္ပဏီ၏ဆာဗာများမှတဆင့်ရယူသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » iOS 10 ဖြင့် iPhone တွင်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်လှည့်ကွက်
Onavo နှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုပြaနာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ဤ onavo VPN SIRI ကိုအသုံးပြုသောဒေတာများကိုအသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည် onavo VPN ကို uninstall ပြုလုပ်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းပြောခြင်းကိုရပ်တန့်သွားသည်
တစ်စုံတစ် ဦး ကဖြစ်ပျက်နေတာလား
ဤ vpn ပရိုဖိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ (အကောင့်များ၊ စကားဝှက်များစသဖြင့်) ကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်ခြင်းရှိမရှိသိလိုသည်။ ငါ့ကိုစိုးရိမ်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ဆောင်းပါးကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာငါအဆိုပြုထား Bitcoin ဝယ်ဖို့, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်ကအချို့သောရေတံခွန်ရှိခဲ့ပုံရသည်။ ယခုအချိန်သည် ၀ ယ်ယူရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှတွေ့မယ်
Apple က iMessage App Store ကိုအက်ပလီကေးရှင်းတွေ၊ ဂိမ်းတွေ၊
Microsoft က MacBook နှင့်သူမတို့ထိသည့်မျက်နှာပြင်ကိုဝေဖန်သည့်အခြားကြော်ငြာတစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်